Beelaha Hawiye oo Muqdisho Kaga Dhawaaqay Dagaal – Rasaasa News
Kismayo, June 18, 2013 – Shir maanta ka dhacay magaalada Muqdisho oo ay isugu yimaadeen beelaha hawiye laggaga hadlay arimaha Jubooyinka, Itobiya iyo Kenya, kaas oo lagu sheegay in dagaal lala galo dalalka dariska.
Shirka oo uu gudoominayey Maxamed Xasan Xaad gudoomiyaha dhaqanka ee Beelaha Hawiye, waxaa ka soo qayb galay qaybaha bulshada iyo xubnaha dawlada ugu jira beelaha Hawiye.
Shirka oo ahaa shir dhaqameed ayaa aad loogu falanqeeyey siyaasada dawlada, laguna taageeray jiritaankeeda. Waxaa aad loogu canaantay dadka dega gabalada Jubooyinka, iyada oo meesha laga sheegay in aan loo diidanayn in ay dagaan gabaladaas, balse ayna maamul ka samayn karin.
Waxay sheegeen dadka shirka isugu yimid in la taageero dawlada loogana dambeeyo arimaha dawlad u samaynta gabalda, xuduuda iyo maamulka guudba, cidii federaal sheegatana ay khaldan tahay.
Shirka ayaa digniin loogu diray dalalka dariska, iyada oo la sheegay in dagaal uu lama huraan yahay hadii ay joojin waayaan faragalinta ay ku hayaan somaliya.
Shirka oo ahaa shir beeleed ayaa si dhab ah uga turjumayey siyaasada dawlada Xasan Sheekh Maxamuud, kuli dadkii ka hadlayna ay ku baaqayeen dagaal iyo in ay xoog ku maquuniyaan maamulada iskood u samaysmay.